Diyaarad ka degtey Wajeer oo laga waayay qof ka mid ahaa rakaabkii saarnaa!! | Baydhabo Online
Gunmen kill a former electoral delegate in Beledw...
Diyaarad ka degtey Wajeer oo laga waayay qof ka mid ahaa rakaabkii saarnaa!!
Diyaarad ka duushay magaalada Muqdisho kuna degtay magaalada Wajeer ee dalka Kenya ayaa laga waayay mid kamid ah rakaabkii saarnaa kadib markii ay baareen ciidamada Booliska magaalada Wajeer.
Diyaaradaha ka duula Soomaaliya ee ku sii jeeda caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxaa ay ku qasban yihiin inay sii maraan magaalada Wajeer si loogu baaro rakaabka iyo xamuulka ay wataanba.
Hase yeeshee waxaa ka dhacday magaalada Wajeer sheeko cajiib ah kadib markii la waayay maanta mid ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaarada oo ka duushay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday Nairobi.
Booliska magaalada Wajeer ayaa waxaa ay ku qaadatay muddo afar saacadood ah inay raadiyaan qofka ka mid ah rakaabka ee hadana la waayay iyadoo weliba la helay boorsadii uu watey qofkaas ka mid ahaa rakaabka.
Rakaabkii saarnaa diyaaradan ayaa waxaa kamid ahaa Wasiir ku xigeenka caafimaadka Cismaan Maxamed Cabdi (Daalo) iyo Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad.
Cismaan Daallo Wasiir ku xigeenka Wasaarada Caafimaadka ayaa ku soo qoray bogiisa Facebook sheekada ku qabsatay garoonka diyaaradaha ee Wajeer isagoo ku tilmaamay safarka inuu ahaa mid taariikhi ah.
“Nairobi wey dheer tahay weyna dhowdahay hadba waa sidii lagaaga dhigo waxaan galney safar gaaban aniga iyo saxiibkeey Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad safarkaas waxuu ahaa mid taariikhi ah. Waxaana naga yaabiyey wakhti badana naga qaatey qof ka mid ahaa dadkii lagu tirinaayey inuu dayaarada kasoo raacey Muqdisho hadana Wajeer markii la yimid la waayey taas waxaa ka daran qofkii Boorsadiisa Dayaarada ayey saaran tahay.”ayuu yiri Cismaan Daallo.
“Taas waxeey keentey dadkii dayaarada saarna in hal hal qof loo baaro loo yeeriyo lasoo dejiyo la saaro hadana lasoo dejiyo la saaro 4 saacadood saf iyo baaritaan ku jira ciidan waxii Wajeer joogey waxii Eey Joogey Dayaarada ayaa lagu baarey hadana waa la waayey ruuxii la raadinaayey bal adigaba sheeg meesha uu aadey qofkaas.”!!!
Ugu dambeyntii diyaarada ayaa afar saacadood kadib loo oggolaaday inay safarkeedii iska sii wadato iyadoo la waayay mid kamid ah rakaabkii ku qornaa inuu saaran yahay diyaarada.